Imbeko izisa iNhlonipho 9X Pro, uMlingo wokuBukela 2 kunye neMicrosoft Earbuds yaseSpain | Iindaba zeGajethi
Imbeko ibonisa iHony 9X Pro, uMlingo woMlingo 2 kunye neMicrosoft Earbuds yaseSpain
UPaco L Gutierrez | | Iiselfowuni, SmartWatch
Umvelisi waseAsia u-Honor namhlanje uvelise iimveliso zawo ezintsha zelizwe lethu. Phakathi kwazo sifumana phakathi kuluhlu Imbeko 9X Pro, kunye esele isaziwa Iprosesa yaseKirin 810 kwaye ngaphandle kweenkonzo zikaGoogle ngaphakathi. Iya kuba sesinye sezixhobo sophawu esivula ivenkile entsha eSpain, eya kuqala ukusebenza ngoMeyi 12. Ayizukuphela kwento ekhoyo kule venkile intsha, kuba nazo zinikiwe IiMicrosoft Earbuds kunye neMagic Watch 2.
Imbeko sele ibhengezile levenkile ikwi-Intanethi, hihonor.com ezakusebenza njengephepha elisemthethweni elizweni kunye nenqaku lesalathiso kuluntu olungabasebenzisi, Oku kuyakuhlaziya ngomhla wokuvula nge-12 kaMeyi, njengoko inkampani sele inike ingxelo kumsitho wokubonisa owenzeke namhlanje. Le webhusayithi iya kubandakanya ikhathalogu ebanzi yezixhobo kuba ziphethe ukuhanjiswa kwazo kwaye ziya kubonelela ngokuhanjiswa simahla kweemveliso ngexabiso eliqala kwi- € 39,90, njengembuyekezo yasimahla nge-31 yokuqala ukusuka ekuthengeni.
1 Imbeko 9X Pro: I-Kirin 810 kunye nexabiso elihlengahlengisiweyo
1.1 Iinkcukacha zoBugcisa
1.2 Uyilo kunye nehardware kuluntu ngokubanzi
1.3 Ibhetri kunye nesoftware esingayilindelanga
1.4 Yonke ikhamera yendlela
2 Hlonipha umlindo 2
3 Yazisa iMagic Earbuds
Imbeko 9X Pro: I-Kirin 810 kunye nexabiso elihlengahlengisiweyo
Isigqibo: 2340 x 1080
I-Kirin 810 7nm
OS: Hlonipha i-UI yoMlingo esekwe kwi-Android 9 Pie
Ngaphambili 16 MPX, F / 2.2
A-GPS | GLONASS | IGALILEO
Uhlobo C lwe-USB
I-Accelerometer, i-gyroscope, isivamvo somxhuzulane, isivamvo sokusondela, ibarometer kunye nekhampasi
Ngama-4000 mAh Li-Po
Uyilo kunye nehardware kuluntu ngokubanzi
I-Honor 9X pro sisiphelo sendlela yokuqala esiboniswe yi-Honor kwivenkile yayo entsha, Esi sigxina kukuhlaziya i-Honor 9X eyanikezelwa kunyaka ophelileyo. Uluhlu oluphakathi oluphakamisa ipaneli ye-IPS ye-IPS ye-6,59-intshi ehlala kuyo yonke imibulelo kwinto yokuba ayinalo naluphi na uhlobo lwenotshi okanye umngxunya kwiscreen, enkosi kwinto yokuba ibandakanya ikhamera yangaphambili enendlela ye-periscope. Emuva sifumana ukugqitywa kweglasi ngembonakalo emile okwe-X ngombala omfusa kunye nokuthe tye ngokupheleleyo kuhlobo lwayo olumnyama.
Imodeli yePro ihlaziywa ngokufaka ngaphakathi kweKirin 810, kunye neenkqubo ze-nanometer ezisi-7 kunye noyilo lweDaVinci yobukrelekrele bokufakelwa, obonelela Ukusebenza okuphezulu kwe-5,6% xa kuthelekiswa ne-Kirin 710 eyandulelayo, njengokusebenza kakuhle okungcono kwamandla. Kwelinye icala, kwinqanaba le-GPU liphucula nge-175%, into eya kuthi kumbandela wobushushu ibe yiyo ilawulwa kukupholisa ulwelo iNhlonipho ibandakanya kule ndawo, enakho ukunciphisa ubushushu ngeedigri ezi-5. Ngokubhekisele kwi-RAM, ibandakanya i-6 GB LPDDR4x. Inzwa yeminwe iya kuba ngasemva.
Ibhetri kunye nesoftware esingayilindelanga
Eyona nto isothusileyo sesiphelo asibobuchule bayo, okanye ukungabikho kweenkonzo zikaGoogle, okusishiyileyo Into engekho endaweni, kukuba isungulwe kwimarike nge-Android 9 Pie njengohlobo lwenkqubo yokusebenza. Into engaqondakaliyo namhlanje, nangona umenzi esiqinisekisa ukuba isiphelo sendlela siza kuhlaziywa kwikamva. Sisiphelo sendlela yokuqala yokufika eSpain ngegalari yeApple yeHuawei. Ibhetri yi-4.000 mAh ene-10W "ngokukhawuleza" kwentlawulo.
Yonke ikhamera yendlela
Esi sixhobo sinekhamera engemva kathathu ene Inzwa ephambili ye-MPX engama-48 ye-MPX, ekugxilwe kuyo ngo-1.8, i-engile ebanzi ye-8 MPX, indawo ekujoliswe kuyo eyi-2.4 kwaye ekugqibeleni ilensi enzulu ehamba kunye ne-2 MPX sensor kunye nokugxila kugxilwe ku-2.4. Kwikhamera yangaphambili sine-16 MPx sensor efihliweyo ngomatshini we-periscope. Imbeko inike esi siginali eyona nqanaba liphezulu lokulungiswa kwemifanekiso, ngale nto ivumela ukufezekisa imifanekiso eqaqambileyo kunye ne-ISO ephindwe kane kunangaphambili. Inkxaso yemowudi yayo emnyama "Super Night 2.0".
Hlonipha umlindo 2
Makhe sithethe malunga newotshi entsha Hlonipha iMilingo yokujonga 2, enezinto ezimbini zoyilo, i-42 kunye ne-46 yeemilimitha ububanzi. Ibandakanya ukucofa insimbi engenasici kunye nebhetri ngokuzimela ukuya kuthi ga kwiiveki ezimbini ngokomenzi. Olu Buko lusebenzisa iprosesa yaseKirin A1. Isikrini yi-1,2-intshi ye-AMOLED kwimeko ye-42mm kunye ne-1,39-intshi yemodeli kwi-46mm ukuya kuthi ga kwi-800 NITS yokuqaqamba, eya kuthi isenze sikwazi ukujonga ngokugqibeleleyo umxholo kwilanga elikhanyayo, nathi. Idibanisa umsebenzi othi "Soloko uboniswa" oya kuthi usivumele ukuba sisoloko sisebenza ukujonga ixesha, sisebenzisa amandla amancinci. Singonwabela umbulelo womculo kwi-4GB yememori yangaphakathi.
Inika esweni ukubetha kwentliziyo okuya kusebenza xa ubhukuda, ngenxa yokuxhathisa kwamanzi, exhasa ukuya kuthi ga kwiimitha ezingama-50 ubunzulu. Kubakhweli beebhayisikile okanye iimbaleki, ibandakanya ii-GPS ezimbini ezinemilinganiselo yomgama echanekileyo, kunye neenkqubo ezili-13 ezichazwe kwangaphambili ezisebenzayo kunye nomsebenzi wokugcina isantya esingaguqukiyo. Inguqulelo ye-46mm iya kufumaneka ngombala omnyama € 129,90 ukusuka kwi-12 ukuya kwi-19 kaMeyi kunyuselo, kwiphepha layo elisemthethweni hihonor.com ke iya kuba yi- $ 179,90. Inguqulelo ye-42mm iya kuthengiswa ngexabiso lentengiso le- $ 129,90 emnyama kunye ne- € 149 ngepinki. Kuzo zombini iimeko kubandakanya ii-headphone zemidlalo. Nje ukuba unyuselo luphele, amaxabiso alo aya kuba yi- € 169,90 kunye ne- € 199,90 ngokwahlukeneyo.
Yazisa iMagic Earbuds
Imbeko ikwaveze ii-headphone zayo ezingenazingcingoUyilo lweendawo ezinengxolo, baya kwenza ukusetyenziswa kwabo "ngamava angaphazanyiswayo okuphulaphula" ngokutsho komenzi. Iindlebe zoMlingo faka ukurhoxiswa kwengxolo esebenzayoNgokusebenzisa inkqubo eneemakrofoni ezimbini ezikwaziyo ukushenxisa ukuya kuthi ga kwi-27DB yengxolo ebanzi kwimeko yeenqwelo moya ukuya kuthi ga kwi-25DB kwimeko yendlela engaphantsi kwendlela, ikwaphucula incoko kwifowuni.
Ngomqhubi we-10mm kunye netekhnoloji yokubhangqa i-Hipair, ikhawulezisa inkqubo yoqhagamshelo, njengoko kwenza isiphelo esiphezulu, ulawulo lokuchukumisa olunokwenziwa ngokwezifiso kuseto. Ezi Ntloko ziya kufumaneka apha iwebhusayithi yabo ukusuka ngoMeyi 12 ukuya ku-19 ngexabiso kwi Ukunyuselwa kwe- € 79,90, eya kuthi emva koko inyuke iye kwi-99,90.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Imbeko ibonisa iHony 9X Pro, uMlingo woMlingo 2 kunye neMicrosoft Earbuds yaseSpain
Ukongeza indawo kwifoto
Umbona njani umzobi kunye nomxholo wengoma ngaphandle kosetyenziso lwangaphandle kwi-iOS nakwi-Android